FANDRIAM-PAHALEMANA AO SOALALA : Nidina ifotony ny prefe sy ny depiote
Ny herinandro lasa teo dia nidina tany Soalala ny prefen’i Boeny sy ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Soalala. 29 octobre 2019
Niaraka tamin’izy ireo tamin’izany ireo tompon’andraiki-panjakana misahana ny filaminana dia ny ao amin’ny Polisim-pirenena, ny Zandarimariam-pirenena ary ny Tafika Malagasy. Nijery ny zava-misy ary nizara tamin’ny vahoaka ny politika ankapoben’ny fitondram-panjakana ary hanehoana ny fiaraha-miasa tsy maintsy misy eo amin‘ny olom-boatendry sy olom-boafidy no anton’ny fidinana.
Nandraisan’ izy ireo fanapahan-kevitra avy hatrany ny olana rehetra azo novahana eny ifotony. Ho an’ireo ilana fanampiana na fankatoavana any amin’ny foibe kosa dia nampita avy hatrany faran’izay haingana. Namory vahoaka, ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny nizarana ny tsara ho fantatra ho fampandehanana ny raharaham-pirenena sy ny raharaham-panjakana izy ireo. Nametraka ihany koa ny paik’ady hisian’ny fandriam-pahalemana maharitra amin’ny alalan’ny fametrahana dina sy andrimasom-pikonolona sy fiaraha-miasa matotra isan-tokony.
Napetraka ihany koa ny bokim-bahiny sy fisafoana. Ankoatra izay dia nojerena koa ny sosialim-bahoaka amin’ny fametrahana fotodrafitrasa toy ny sekoly, toho-drano ho an’ny kaominina efatra notsidihana ao amin’ny distrikan’i Soalala. Nisy ny fijerena ny tetezana ao Andranomavo izay nandraisana fanapahan-kevitra avy hatrany amin’ny alalan’ny CLD tantanin’ny solombavambahoaka sy ny prefe, toy izany koa ny jiro izay hapetraka ao Antanambao Andranomavo.